साप्ताहिक राशिफल (फागुन ९ देखि फागुन १५ सम्म) – HostKhabar ::
साप्ताहिक राशिफल (फागुन ९ देखि फागुन १५ सम्म)
व्यापारमा लाभ हुनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। सन्तानसुख प्राप्त होला। अनुसन्धानात्मक कार्यमा सफलता पाइनेछ। कूटनीतिक कार्य खासै सन्तोषजनक नरहला। राजनीतिक कार्यमा गतिरोध आउनेछ। आफन्त तथा मान्यजनको सहयोग पाइनेछ। साहित्यप्रति रुचि बढ्नेछ। मनोरञ्जनमा धेरै खर्च हुनेछ। मानसिक चञ्चलता बढ्न सक्छ।
राजनीतिक कार्यमा अवरोध आउनेछ। स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार होला। रचनात्मक कार्यमा मन जानेछ। समाजमा मान–सम्मान प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रै उन्नति हुनेछ। तरल पदार्थको व्यापार लाभदायक रहनेछ। अवरुद्ध कार्य साथीभाइको सहयोगले सुचारु हुनेछ। प्रेमी–प्रेमिकाबीच सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ।
दैनिक कार्य गर्दा सावधानी अपनाउनुहोला। शारीरिक थकान बढ्नेछ। सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ। कृषिकार्यबाट पर्याप्त लाभ हुनेछ। महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दा मान्यजनको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुनेछ। सामाजिक कार्य गर्ने अवसर पाइनेछ। साझेदारी कार्यमा हानि बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। पति–पत्नीबीच मनमुटावको स्थिति रहला।
अध्ययन–अध्यापनमा प्रगति हुनेछ। वैचारिक मतभिन्नता रहे पनि आफन्तको सहयोग पाइनेछ। कर्मप्रति निष्ठा बढ्नेछ। महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गरिनेछ। धनलाभ हुन सक्छ। सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। अध्ययन–अध्यापनमा बाधा उत्पन्न होला। खर्च बढ्नेछ। असमझदारीका कारण परिवारमा तनावको स्थितिरहला। स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्ला। अचल सम्पत्तिको विवाद बढ्नेछ। नयाँ काम सुरु गर्दा मान्यजनको सहयोग लिनु हितकर हुनेछ।
स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। व्यवसायबाट लाभ हुनेछ। प्रेमी–प्रेमिकाबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्लान्। वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ। राजनीतिक कार्यमा आंशिक सफलता मिल्ला।
व्यापार–व्यवसायमा प्रगति हुनेछ। आफन्तसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। विश्वासपात्रबाट धोका हुन सक्छ, सचेत रहनुहोला। मनमा द्विविधा बढ्न सक्छ। प्राविधिक कार्यमा प्रगति हुनेछ। राजनीतिकर्मीका लागि साता खासै उपलब्धिमूलक छैन। शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ। सन्तानबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। अनुसन्धानात्मक कार्य सफल रहला।
आफन्तजनसँग भेट गर्ने अवसर जुर्नेछ। व्यापारमा लाभ हुनेछ। मनोरञ्जनमा खर्च गरिनेछ। समाजसेवामा रुचि बढ्नेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। मानसिक चञ्चलता बढ्न सक्छ। मित्रबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय बन्नेछ। साताको अन्त्यमा वैदेशिक रोजगारी सन्तोषजनक नरहला। अध्ययनमा सफलता हात लाग्ला।
चञ्चलता बढ्नेछ। अध्ययन–अध्यापनमा सफलता पाइनेछ। वैदेशिक यात्राको योग छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार हुनेछ। व्यवसायमा सुधार आउनेछ। दैनिक खर्च वृद्धि हुनेछ। साताको मध्यमा आकस्मिक धनक्षय हुन सक्छ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा उन्नति हुनेछ। मुहारमा कान्ति छाउनेछ।
अचल सम्पत्तिको कारोबार गरिनेछ। सामाजिक कार्यमा मन जाला। जागिरमा पदोन्नति हुने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्न सक्छ। जिम्मेवारी बढ्न सक्छ। कुरा काट्ने बढे पनि जीत हात लाग्नेछ। आफन्तको सहयोग पाइएला। खर्च बढ्नेछ। व्यापार–व्यवसायमा प्रशस्त लाभ हुनेछ। अध्ययन–अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ।
गरेका कार्यबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ। न्यायिक विवादको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सभा–सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर पाइनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत हात लाग्नेछन्। साताको अन्त्यमा व्यवसायमा परिवर्तन आउन सक्छ। उपचारमा खर्च हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा सफलता मिल्ला। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहला।
मित्रबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। विशिष्टजनको सल्लाहमा गरिएका कार्य सफल हुनेछन्। भूमिसम्बन्धी कारोबार सफल रहला। आयआर्जन सन्तोषजनक रहनेछ। शारीरिक श्रम बढ्नेछ। रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनेछ। रचनात्मक काम गर्नेका लागि साता राम्रो रहेको छ। अध्ययन–अध्यापनमा अवरोध देखापर्न सक्छ। कृषिकार्यबाट राम्रो लाभ हुनेछ।
मंगल कार्यमा सहभागी भइनेछ। छोटो र रमाइलो यात्रा गरिएला। अध्ययन–अध्यापनमा समय बित्नेछ। मानसिक चञ्चलता बढ्न सक्छ। खर्च वृद्धि हुनेछ। आयआर्जन सामान्य रहनेछ। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिन सक्छ। साहित्यकारका लागि साता फलदायी छ। मुहारमा कान्ति छाउनेछ। बोलीको प्रभाव बढ्ला।
बि.स. २०७९ बैशाख १८ गते आइतबार, आजको राशिफल
बि.स.२०७९ बैशाख १७ गते शनिबार, आजको राशिफल
बि.सं. २०७९ बैशाख १६ गते शुक्रबार, आजको राशिफल